Gemalto फिंगरप्रिन्ट रिडरको साथ क्रेडिट कार्ड प्रस्तुत गर्दछ ग्याजेट समाचार
अलि अलि गर्दै मोबाइल भुक्तानी विश्वव्यापी रूपमा ग्राउन्ड प्राप्त गर्न जारी छ। विश्वको विभिन्न क्षेत्रहरूमा जस्तै चीन, स्मार्टफोनहरू पहिले नै पहिलो उपकरण हो जुन प्रयोगकर्ताहरूले भुक्तानी गर्दा प्रयोग गर्दछन्। तेसैले हामीले बजारमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तनको सामना गरिरहेका छौं। यद्यपि अधिकांश पश्चिमी बजारहरूमा क्रेडिट कार्ड यो अझै पनी सबैभन्दा साधारण विधि हो।
यद्यपि, केहि समयको लागि हामी हेर्दै छौं कि कसरी «सम्पर्क रहित» भुक्तानी अगाडि बढिरहेको छ। यस उपकरणमा ल्याएर कार्ड मार्फत भुक्तान गर्ने विकल्प धेरै सहज छ र हरेक पटक अधिक प्रतिष्ठानहरूले यो विकल्प प्रस्ताव गर्दछ। त्यसैले यस्तो देखिन्छ कि यो बजार गइरहेको दिशा हो।
Gemalto, सिम र क्रेडिट कार्ड निर्माणको लागि तपाइँ जस्तो लाग्न सक्ने एक नाम। अब, तिनीहरूले एक घोषणा गरेका छन् क्रेडिट कार्डको नयाँ प्रकार। यो एक कार्ड मोडल हो जसले मात्र सम्पर्क रहित टर्मिनलहरू बनाएर भुक्तान अनुमति दिन्छ हाम्रो फिंगरप्रिन्टको प्रयोग.
गत वर्ष गेमेल्टोले यस प्रविधिको अनावरण गर्‍यो फिंगरप्रिन्ट सेन्सरको साथ क्रेडिट कार्ड विकास गर्न। यद्यपि यसको विकास ढिलो भइरहेको छ। तर कम्पनीले यस विकासमा ठूलो शर्त लगाएको छ, त्यसैले उनीहरू यसलाई सफल बनाउनका लागि आवश्यक सबै कुरा गर्नेछन्। अब, कम्पनीले यस प्रकारको कार्डमा एक NFC चिप थप्यो। यस तरीकाबाट, यो सम्पर्क रहित टर्मिनलमा प्रयोग गर्न सकिन्छ पिन प्रयोग नगरी नै।
यस मामला मा को प्रविधि पहिचान POS मा निर्भर गर्दैनतर यो कार्डमा निर्भर गर्दछ। जब भुक्तान गर्दा हामीलाई केवल आवश्यक हुन्छ कार्डलाई नजिक ल्याउनुहोस् र हाम्रो औंला सेन्सरमा राख्नुहोस्। यस तरीकाबाट खरीद अधिकृत छ। एक धेरै साधारण प्रक्रिया। एक विकल्प जुन धेरै सफल हुन सक्दछ, किनकि त्यहाँ अधिक र अधिक सम्पर्क रहित टर्मिनलहरू छन्। थप, क्रेडिट कार्डले यो प्रणाली अधिक सुरक्षित प्रयोग गर्दछ। थप रूपमा, दुबै फिंगरप्रिन्ट सेन्सर र NFC सेन्सर POS द्वारा प्रसारण गरिएको ऊर्जा द्वारा खुवाउन गइरहेका छन्।
यो क्रेडिट कार्ड अहिले साइप्रस बैंकमा उपलब्ध छ। विश्वका अन्य क्षेत्रहरू २०१ in मा सामेल हुने आशा गरिन्छ। तपाइँ यस प्रणालीको बारेमा के सोच्नुहुन्छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » सामान्य » हाम्रो बारेमा » फिंगरप्रिन्ट रिडरको साथ पहिलो सम्पर्कविहीन क्रेडिट कार्ड अब एक वास्तविकता हो